Nicolas Otamendi oo hishiis cusub u saxiixay kooxdiisa City. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Nicolas Otamendi oo hishiis cusub u saxiixay kooxdiisa City.
Nicolas Otamendi oo hishiis cusub u saxiixay kooxdiisa City.
Kooxda Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal marisay difaaca kooxdeeda iyo xulka qaranka Argentina ee Nicolas Otamendi. Manchester City ayaa Nicolas Otamendi la soo wareegtay xagaagii 2015 kii wuxuuna hadda ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan safka Guardiola isla markaana galay quluubta jamaahiirta Sky Blues.
Warka ay Manchester City ugu dhawaaqday heshiiska Nicolas Otamendi ayaa lagu yiri: “Nicolas Otamendi waxa uu kordhiyay qandaraskiisii City oo uu ka dhigay ilaa 2022. Difaaca ree Argentina waxa uu xili ciyaareedkan ku soo jiray qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo seegay hal kulan oo kaliya ee 23 kii kulan ee Premier League ee ilaa hadda la soo ciyaaray.
Heshiiska cusub ee uu saxiixay Nicolas Otamendi ayaa dhacaya marka ay da’diisu noqoto 34 sano jir isaga oo hadda ah 29 sano jir taas oo la micno ah in City ay go’aamisay in waayihiisa ciyaareed inta ka hadhsan uu ku qaadan karo Etihad Stadium.
Difaaca reer Argentina ee Nicolas Otamendi aaya Manchester City u saftay 118 kulan kadib markii uu ka soo wareegay kooxda reer Spain ee Valencia xagaagii 2015 kii halkaas oo uu ku qaaday hal xili ciyaareed oo kaliya wuxuuna hore afar xili ciyaareed ugu soo qaatay kooxda reer Portugal ee FC Porto.
Nicolas Otamendi ayaa si sahlan ula qabsaday hanaanka ciyaareed ee uu Guardiola caanka ku yahay wuxuuna macalinka reer Spain ee Guardiola uu xidigan ku naanaysay: “General’ isaga oo sheegay in la’aantiis ayna ku jireen kaalinta kowaad ee Premier League.
Nicolas Otamendi ayaa xili ciyaareedkan ah xidiga kubbadaha ugu badan dhamaystiray isaga oo 23 kii kulan ee Premier League ugu horeeyay dhamaystiray 2033 kun oo kubbad dhiibis ah wuxuuna difaaca ku soo xiga ka sareeyaa 400 kubbad dhiibis oo uu dhamaystiray.